FANKALAZANA NY ANDRON’NY 8 MARSA 2022 - SMMC Company
FANKALAZANA NY ANDRON’NY 8 MARSA 2022
Ny 08 marsa dia andro natokan’ny Firenena Mikambana ho andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy na andro hahatsiarovana manokana ny vehivavy.
Nankalazaina ny Talata 08 Marsa 2022 teo izany. Ny lohahevitra noraisina tamin’ity taona ity moa dia ny hoe “VIAVY MIAVOTSE, miatrika sy mifanampy, taratry ny fitovian-jo sy antoky ny Fampandrosoana lovain-jafy”. Ka novoizina nandritra izany fankalazana izany ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fizakan-tenan’ny vehivavy.
Ny teto Toamasina manokana dia naresaka tokoa ny fankalazana ny andron’ny vehivavy maneran-tany ary tsy nahasakana ny fankalazana izay nataon’izy ireo ny orana nikija.
Izany hetsika izany moa dia teo ambany fiahian-dRamatoa isany ISMAEL Mbotimina Sophie, vadin’ny Governora, TSIAVITRA Anne Marcelle, vadin’ny Préfet de la Ville de Toamasina, KALOBE Melise Herman, vadin’ny Ben’ny Tanànan’i Toamasina, ary MABO Erica, Filohan’ny Fikambanam-behivavy rehetra eto Toamasina na antsoina ihany koa hoe FEDAFTO (Fédération des Associations des Femmes Toamasina).
Toy ny isan-taona, ny vehivavy mpiara-miasa ato amin’i SMMC (APF SMMC na Association du Personnel Féminin de la SMMC) dia anisan’ny mandray anjara mavitrika amin’ny filaharana. Izany moa dia notohizana tamin’ny fifampiarahaban’ny vehivavy rehetra mpiara-miasa, taty amin’ny toeram-piasana, narahina fiaraha-miala hetaheta.
#8marsa #androiraisampirenena #vehivavy #viavymiavotse #smmc #smmcmadagasikara